Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – ‘तामाङ’ शब्दको उत्पति कसरी भयो ?
‘तामाङ’ शब्दको उत्पति कसरी भयो ?
Sep 01, 2016 admin Articles, Local News
तामाङ शब्दको ईतिहास र प्रयोग: तामाङ शब्द मुख्यतया नेपालको राजाधानी वरीपरी घेरिएर घनाबस्ती बनेको नेपालमा प्रथम आवाद गर्ने मङगोलियन मोलको मानवजाती वा समुदायलाई बुझाउंदछ। तामाङहरुले आफ्नो समाज व समुदाय माझ आफ्नो परिचय ‘तामाङ’ भनेरै चिनाएको पाईन्छ। ‘तामाङ’ शब्दको प्रयोग कहिले देखी भनेको रहेछ हेरौँ।
त्यस्तै थकाली लालचन, भट्टचन , शेरचन लेखाए पनि अझै उनिहरु आफ्नो भाषामा भन्नु पर्दा ‘तमन’ मै गर्व गर्छन्, अनि गुरुङ्हरु आजभोलि ‘गुरुङ’ भन्नुमा भन्दा बेसी ‘तमु’ भन्न् रुचाउंछन किनभने तामाङ/तमु भनेको आत्मादेखिको भावनात्मक रुपमा गौरवपूर्ण मौलिक जातिय पहिचान हो। यस्तो आफ्नो सदियौँदेखिको वास्तविक पहिचान तामाङलाई ‘भोटे’ भनेर गरिने हेय र अपमान सहन नसकेर नै राणाकालमा आएका तत्कालिन ब्रिटिश सरकारका ठुला कमाण्डरको अङगरक्षक तथा सेवक तामाङ सरदार जंगबिरले आफुहरु पहिलेदेखी नै ‘तामाङ’ भनेर चिनिने आशयको ‘हामी बाह्र तामाङ्हरु’ भन्ने दाबिका साथ बाह्र तामाङलाई ‘लामाभोटे’ नभनी आफ्नो थर लेख्दा ‘तामाङ’ नै लेख्न पाउँ भनी निवेदन लेखे। उनको यो निवेदनको सुनुवाई स्वरुप सम्वत १९८९ भाद्र ६ का दिन तामाङ्लाई ‘लामाभोटी’ नभनी तामाङ नै भनी बोलाउन र लेख्न स्विक्रिती पत्रमा ‘हामी बाह्र तामाङ्लाई’ भनी उनले दावी गरेको स्पष्ट देखिन्छ। बहादुर जंगवीरको यो दाविले शासकहरुले लामभोटे भनेर सम्बोधन गर्ने गरेतापनी आफुभित्र पहिलेदेखी नै तामाङ भन्ने पहिचन रहेको कुराक पुषती हुन्छ। शायद बहादुर जंगवीर तत्कालिन ब्रिटिश सेनाको एस्डी नभएको भए उनको निवेदन उपर दमन हुन सक्थ्यो अत सरकारी प्रथामा चलेको चलनको विरुद्ध आवाज उठाउनेको शिर छेदन हुने थियो। यही त्रासले यो भन्दा पहिले तामाङ्हरुले आफुलाई तामाङ भन्न पाउँ भनी निवेदन दिन सकिरहेका थिएनन्।
तामागबाट तामाङ शब्द बनेको होइन माथि नै चर्चा भाईसकेको ‘तामग’ शब्दको ‘मग’ बाट ‘मा’ हुने कुनै आधार देखिंदैन । ‘माग’ बाट ‘माङ’ नबनिकन शब्द निर्माण प्रकृया अनुसार ‘तामग’ बाट तामाङ हुने सम्भावना छैन। किन भने अपभ्रंश व समास भएर बन्ने शब्दहरुको एक अर्कोमा सम्बन्ध रहेको हुन्छ। तामाङ र तिब्बती भाषामा ‘ग’ ध्वनिबाट ‘ङ’ ध्वनिमा परिवर्तन भएको अन्य रुपहरु पाइंदैन। बरु’ग’ ध्नी ‘क बा ‘ख’ ध्वनिमा रु बादलएको पाईन्छ। त्यस्तै तमाङ भाषाको ‘ग’ नेपाली वा संस्क्रितमा ‘घ’ भएको पाईन्छ। जस्ताइ नाकि=नागी, गाङ ल घाङ उच्चारण भएको पाईन्छ। त्यसतै ‘ङ’ ध्वनी ‘न’ भएका पाईन्छ जस्ताइ ङ्यान्बा को न्यान्बा , ङिस को निस तर ‘ग’ बाट ‘ङ’ भएको पाइँदैन । त्यसैले ‘तामग’ बाट तमाङ बन्न कठिन छ। तामाङ र तिब्बती संस्कृतिमा भिनाता: तामाङ र तिब्बती भाषा एउटै परिवारभित्र पनेर भाषा भएकोले छिमेकको सामिप्यता लिपिमा समानता बाहेक अन्य कुरा भाषाको व्याकरणिय संरचना र चरित्रमा भिन्नता छ।
बांकी मौलिक भेषभुषा संस्कार संस्क्रिती (चारदाम , थुन्दा सोर्सी जस्ता रिमठिमहरु) सँग कुनै पनि छेउ मिल्दैन। उदाहरणको लागि तामाङ हरुको महान चाड ल्होछर र तिब्बती ल्होछार बुद्ध जयन्ती पर्वको तिथी मितीमा भिन्नता छ। तिब्बतिहरुको ज्योतिष परम्पराको अध्ययन गर्ने हो भने उनिहरुमा प्रचलित ल्होछार परम्परा पाँचौ दलाई लामाको उदयपछी मात्र राज्य स्तरबाट मनाउन थालिएको हो । तर तामाङहरुले मानि आएको परम्परा झन्डै ५००० वर्ष पुरानो हो । त्यसकारण तामाङ ल्होछार तथा बुद्ध जयन्ती तिब्बती भन्दा भिन्नै तिथी मितीमा हुन्छ । तामाङ जातिमा भएको ताम्बा प्रथा तामाङले घर मै बुन्ने ऊनको घरबुना लुगाहरु सुरकाइ , घलेक (ग्या/गातो) लगाउने प्रथा जो पुर्वका भुटान देखी नेपालको पश्चिम हुम्ला , कर्णाली सम्म पाईन्छ। तर तिब्बतीहरुमा पाइदैन। त्यसैले तामाङहरु सोङ्चेन गाम्पोको सेना या रैती भएको तथा तिब्बतीहरु नै हुन भन्ने यस्तो कुनै गन्ध तामाङ समाजको संस्कार, संस्क्रिती र परम्परामा पाइंदैन । तसर्थ तिब्बती घोडाचडी सैन्य ‘तामाग’ बाट तामाङ भएको होइन भन्ने बुझ्न तिब्बती संस्क्रिती र तामाङ सँकृतिलाई नजिकबाट चिन्नेको लागि त्यती गाह्रो पर्दैन।
– (छार गोङमा मासिकबाट साभार )
tweet तम्बा नै तामाङ संस्कृतिको निर्माता:
अधिकार प्राप्तिका लागि तामाङ एकताको आवश्यकता–मन्त्री तामाङ